Ngemva emakethe Ugcwalise ikhaya PC kanye nemboni yezikaqedisizungu sekukhona esikhathini sangempela, ukhuluma ngani "ukufa" zemidlalo ebhodini. Kwabe sekuvela ukuthi - kwesikhathi. Zonke izingane (kanye, njengoba kuvela, abadala) yayisazogcwaliseka ukuze kujabule inkambu umbala, welulele etafuleni lapho ufisa ukuhambisa chips ku inani lamaphuzu eyawela amadayisi baxoshwa. A zazikujabulela uma ibhodi ngezandla zakhe wenza umdlalo - ngoba ke ungakhetha ukuthi isihloko ofuna lokho.
imidlalo ibhodi udumo asikapheli. Adume "monopoly", isibonelo, wayemthanda emhlabeni wonke kusukela ngo-1934. Kodwa imininingwane ikopishwe umdlalo "monopoly" ngezandla - kungcono isidina, uyavuma. Akungcono ukukhombisa ubuncane emcabangweni ukuqamba kabusha amakhadi isakhiwo amabhizinisi ukuthi kukhona edolobheni lakho noma izwe? Lokhu kuzokwenza umdlalo useduze nakakhulu yiqiniso.
Umdlalo mncane kakhulu kungaholela ingane ezweni imali, zingafundi nje ukuzisebenzisa, kodwa futhi ukubala izindleko. IBhodi umdlalo, umsebenzi wezandla zabo ukuthola isihloko engcebweni ehlane kwenza kube nokwenzeka ubuyela emzini futhi emakethe ukuthenga izinto ezidingekayo imfuno. Kodwa lokho ukuchitha imali amvusa eziyigugu? On the "imbiza okuphakade" ngamanzi ahlanzekile? Noma "intambo eside" ukuze bakwazi ozakwehlela "bashiya kahle", kodwa endleleni emuva ingozi ukufa ukoma? Kufanele sikhethe ukuthi ubani.
Ukuthuthukisa umdlalo webhodi, ngezandla zabo izakhiwo, ngempela ihilela isici sezemfundo. "Sinqobe izithiyo": uphasiswe kuphela lapho ingane ngendlela efanele ukufunda umusho ekhadini. "Afrika Photo Safari": "thatha isithombe" isilwane, kufanele uthole isithombe sakhe encwadini nokufunda incazelo ikhathalogi. "Astronauts", "flying" emkhathini kuhambisana umhlangano mayelana nezinto zasemkhathini, izinkanyezi nemilaza ngayinye kufanele kube indaba mini-a.
Vele wenze amakhadibhodi amabhokisi ne izithombe ngababili, mix nabo futhi abeke etafuleni "jacket" up - nakhu umdlalo webhodi ukuthola izithombe ezifanayo. Ekuqaleni, ziphenywe kwelinye ibhokisi, bese - yesibili. Uma izithombe kwi kubo zihlukile - imininingwane esanda wagumbuqela "jacket" phezulu; uma okufanayo - ukuhlala. IBhodi umdlalo ngezandla zabo zingase zibe yinkimbinkimbi: esikhundleni isithombe sesibili kupela izwi ngolimi okungelona lwakubo; ngakho basuke kangcono zikhunjulwe, plus olusha silulumagama.
Ngo ebanzi pan engajulile kanye isikhunta ngobumba iziqhingi manzi, zamakhorali nezinto Shoals, uqoke nezimbobo ngemibala ehlukene, eyenziwe shades efanayo izikebhe elula. Manje ungadlala okungenani ukuba Laba, okungenani kule Pirates zaseCaribbean. Ingane idlala indima umoya ohlabayo oseyili lwemikhumbi, kanyekanye enze kutivocavoca umzimba.
Lezi izibonelo ezimbalwa ukucacisa: ibhodi umdlalo ngezandla zabo ingenziwa cishe noma yini futhi kunoma isiphi isihloko. Into esemqoka - ukuthi kwakuhamba kahle, futhi kwakungeke engasenandaba ngokushesha ngemuva kokuqala. Futhi okubaluleke, ukuthi injabulo efanayo kususelwe inqubo yokudala umdlalo ngezandla zabo.
Izibani LED ngezandla zabo. LED bacwilisa izibani
Amaholo Real. surfing Inthanethi: kanjani ukwandisa imali?
Isifingqo zomculo "Amakati", umlando walo Abadali
Linea alba - kuyini? Izimpawu hernia linea alba, ukusebenza
Navy Day - kuyini?